#Madagascar – Saran-dalana eto andrenivohitra : hijanona Ar 400 ihany ! | ONG Lalana Blog
#Madagascar – Saran-dalana eto andrenivohitra : hijanona Ar 400 ihany !
Publié le 3 décembre 2012 par Lalana
Ny mpianatra, ny zokiolona ary ny mpiasan’ny orinasa afa-kaba irery ihany no hahazo tombony amin’ny saran-dalana Ar 300 raha ny tapaka nandritra ny fihaonana’ireo mpitatitra (UCTU, zotra regionally, zotra nasionaly) tamin’ny filohan’ny tetezamita omaly hariva tao Ambotsirohatra.
Manomboka anio arak’izany dia tsy afaka ny hivezivezy sy hanitsaka ny zotran’ny UCTU intsony ny UCTS. Ny UCTS moa izay tsy anisan’ireo nivory sy nidinika niaraka tamin’ny filohan’ny tetezamita, eny fa na dia efa tonga teny amin’ny lapan’Ambohitsirohatra ihany koa aza ireo mpandrahara ara-pitanterahana ao amin’io Zotra io. Mikasika ny ho fanatsarana ny kalitaon’ny fitaterana eto an-drenivohitra kosa indray, dia tapaka nandritra ny fihaonan’ireo mpitatitra tamin’ny filohan’ny tetezamita fa hisy ny fijerena “Bus” vaovao any Chine izay ho tanterahin’ny fanjakana sy ny solontenan’ireo mpitatitra. Ho mora arak’izany raha ny fantatra ny vidin’ity “Bus” ity satria dia tsy hisy ny fandoavana ireo karazana hetra, ary mbola ny fanjakana ihany koa no hametraka ny petra-bola voalohany any amin’ny banky.
Nandritra ny ora 2 mahery teo ho eo no nifampidinika ny solontenan’ireo mpitatitra izay mivondrona ao amin’ny UCTU, zotra regionaly ary ny zotra nasionaly niaraka tamin’ny filohan’ny tetezamita. Tamin’ity fihaonana tamin’ny filohan’ny tetezamita ity arak’izany izay vao azo lazaina ho afa-po tamin’ny dinika sy ny fifanarahana ireo mpitatitra. Na izany aza anefa dia notazomina ho Ar 400 hatrany ny saran-dalana amin’ny ankapobehany eto andrenivohitra. Raha ny nambaran’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina moa dia efa tamin’ny taona 2004 no Ar 300 ny saran-dalana teto andrenivohitra raha toa ka mbola Ar 1280 ny litatry ny solika fitanterana. Amin’izao fotoana anefa dia Ar 2730 ny litatry ny solika fitanterana ka izany no anisany nitazomana ny saran-dalana ho Ar 400. Nanome toky kosa indray anefa ny avy amin’ireo solontenan’ny mpitatitra fa “hisy ny fijerena manokana ny fanatsarana ny kalitaon’ny fitanterana eto andrenivohitra”. Tsy mbola nofaritan’izy ireo mazava anefa izany, fa ny hany fantatra dia hisy ny fijerena manokana ny fahadiovana sy ny fahatsaran’ny seza fipetrahana ao anatin’ireo fiara fitanterana ireny. Ao anatin’ny ezaky ny fanjakana ihany koa anefa araky ny nambaran’ny filohan’ny tetezamita ny hampiditra “Bus” vaovao manara-penitra izay hampiasana eto andrenivohitra. “Rariny raha toa ka atao manara-penitra ny fiara fitanterana eto andrenivohitra, satria izany no maha renivohitra ny renivohitra”, hoy ny filohan’ny tetezamita. Nisy arak’izany ny fampisehoana ny saran’ilay “Bus” izay naseho tamin’ireo mpitatitra. Samy niaiky moa ny roa tonta fa ilain’ny mponina eto andrenivohitra ny fiaraha tahak’ireny.